GUDAHA – Garsoore Sports
Orodyahan Cali Iidow Xasan oo Soomaliya ku matalayay oradka 1500 Mitir ee cayaaraha Olombikada adduunka oo ka socda magaalada Tokyo ee waddanka Japan ayaa galay kaalinta 10-aad. Cali Xasan ayaa ku orday 3:43.9, wuxuuna ka…
TOOS: Geeska Afrika vs Heegan
FA-ga Soomaaliya Oo Magacaabay Isku-duwaha Qaranka Iyo Ku-xigeenkiisa
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubbada cagta ayaa magacaabay isku duwaha xulka qaranka Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa, si loo dardar geliyo howlaha baaxada leh ee qaranka. Jamaal Xaashi Tuurre ayaa loo magacaabay in uu noqdo isku duwaha…
Cayaartoyda Qaranka oo cabasho ka dhan ah Xiriirka u qoray FIFA
Qaar ka tirsan cayaaroyda xulka qarankeenna Soomaaliya ayaa warqad dheer oo cabasho, garnaqsi iyo sixitaan cadaalad raadin ah u diray xiriirka dunida ee kubbadda cagta FIFA. Warqadda oo Af-Ingiriis ku qorneyd ayaan iyadoo tarjuman halkan…
Xulkeena qaranka Soomaaliya oo guuldarro 2:1 kasoo gaaray xulka Cumaan kulankii is reeb-reebka tartanka FIFA Arab Cup 2021 ayaa soo bandhigay qaab cayaareed aad u heer sarreeya inkastoo taasi aanay kahor joogsan in qaar kamid…
Xulka kubbada-cagta Soomaaliya ayaa guuldarro kasoo gaartay xulka Oman kulankii ka tirsanaa is reebreebka tartanka FIFA Arab Cup ee dalka Qatar. Cumaan ayaa 2 gool oo ay qeybtii hore dhalisay uga filnaatay guushii ay ka…
Xulka qarankeenna Soomaaliya ayaa kulan Isreebreeb ah kula cayaaraya xulka Cumaan dalka Qatar waxaana qeybta hore ee kulanka uu kusoo idlaaday 2:0 oo Soomaaliya lagu hoggaaminayo. Xulka Cumaan ayaa billoowgii cayaarta u muuqatay kuwo halis…
Cayaaryahanka kooxda San Jose Earthquakes ee horyaalka dalka Mareykanka ee MLSka Siad Haji, ayaan kasoo muuqan kooxda xulkeena kubbada-cagta Soomaaliya ee dalka Qatar kula cayaaraysa Dalka Cumaan isreebreebka Tartanka FIFA Arab Cup goordhow. Xiriirka kubbada-cagta…
Sawirro: Tababarkii Ugu Dambeeyay Ee Xulka Kahor Kulankooda Berrito Ee Cumaan.
Xiddigaha xulka qaranka Soomaaliya ayaa soo afjaray isku diyaarinta kulanka adag oo ay Axadda berrito ah la cayaari doonaan xulka Cumaan kulan ka tirsan is reeb-reebka tartanka FIFA Arab Cup ee ka dhici doona dalka…